Abadala be-Shelf Corporation FAQs
Iyini inkampani yamashalofu ezinkampani ezihlanganisiwe?
Yiziphi izinhlobo zezinkampani zamashalofu?
Imuphi unyaka wekhampani yamashalofu ongilungele? Yini iminyaka yenkampani yamashalofu
Izinzuzo ezingeziwe zenkampani yamashalofu?
Yini i-Shell Company noma Corporate
Izingxenye ezengeziwe Iwebhusayithi Nemininingwane
Inkampani yamashalofu yi-LLC noma inhlangano eyakhiwe ngaphambili
usuku. Imvamisa, kuzobe kungewenzi ibhizinisi. Akubambi
izimpahla, azange zifumane isikweletu futhi kusamele zikhiphe isitoko. Lezi
izinkampani zibizwa nangokuthi yizinkampani zamashalofu ezinamava. Nini
uthenga inkampani esezingeni eliphezulu yamashalofu, kuzokwenza
fika unezinto zakho ezifakwe isitayela ezifakiwe
nguhulumeni nosuku lokufakwa kwawo futhi:
"Isenzo se-Sole Incorporator" esidlulisa inkampani
Amaminithi emihlangano (amafomu amasampula angenalutho)
Ikhithi ehlangene (incwadi yokurekhoda)
Izitifiketi zezitoko (amasheya angenalutho, angakhishwa)
Imithetho Yenhlangano (amafomu angabhalisiwe)
Uhlu lokuhlola izinhlangano olukwazisa izinto ukuze ugcine inkampani yakho
Insiza ye-ejenti ebhalisiwe
I-CD enamafomu abalulekile
Inombolo Yobunikazi beNtela
Eminye imibhalo ebalulekile
Buyela ku-Shelf Corporation
Yiziphi izinhlobo zezinhlangano ezindala zamashalofu?
Izinkampani zeshelufu nezindala zingasho izinhlobo ezahlukahlukene zezinto ezisemthethweni. Lokhu
kufaka phakathi izinkampani ezifuywayo zase-US nezama-LLC, kanye ne-offshore kanye
izinhlangano zomhlaba jikelele. Igama elithi "eshalofini" noma "elidala" libhekisela kuphela ku
iqiniso lokuthi inkampani isivele ifakiwe futhi ihleli “ku-
eshalofini ”elinde ukuthengwa.
Buyela emuva Inkampani Yeshelf
Imuphi unyaka wekhampani yamashalofu ongilungele?
Kubalulekile ukukhetha ubudala obuhambisana nezidingo zakho. Okwe
usonkontileka wokwakha noma inkampani yokubonisana inani leminyaka phakathi
ukuba khona kubalulekile kumakhasimende. Uma ngabe ubusemboni yezokwakha iminyaka ye-15, ngokwesibonelo, ukuthola inkampani eneminyaka engu-15 kungasho ukuthi kunengqondo ngoba kuyahambisana nesikhathi sakho ebhizinisini. Ukuze uthole izinkontileka ezithile, imfuneko ejwayelekile yobudala bebhizinisi yiminyaka emibili. Lokho kungenzeka kube akuyona ukuphela kwento ekutholeni isivumelwano sokubhida, kepha kungaba yinye yezinto eziningi zokuhlola ibhokisi, ikakhulukazi, njengoba sesishilo, lapho iminyaka yakho yobudala kanye nobudala bebhizinisi bufana. Ngaphezu kwalokho, abanye babika ukuthi
ibhizinisi elifuna ukwakha isikweletu senkampani, leya ikhula kangcono. Lokhu kungenzeka noma abaningi bangabi njalo, kepha kunezinye izici ezingaba nesisindo esithe xaxa njengokuzuzisa kwebhizinisi nokuzimela. Ukudalulwa okugcwele kuyanconywa. Izinkinga ezinkulu yimibono yamakhasimende angahle abe
abangahle baboleke. Ngabe ibhizinisi lineminyaka emingaki ukuze likholise
iklayenti noma ibhange ukuthi ibhizinisi liphephe futhi lizinzile? Ngabe unyaka
yebhizinisi lakho elibalulekile? Imvamisa kumakhasimende noma kumbolekisi. Asisho ukuthi ubudala ukuphela kwento lapha kodwa bungafaka umthwalo oseceleni kwakho kwesilinganiso, ngaphezu kwezinye izinto ezibaluleke kakhulu.
Kusho ukuthini iminyaka yenkampani yamashalofu?
Iminyaka yenhlangano yamashalofu ingokoqobo njengobudala bomuntu
kokuba. Umthetho ubiza inkampani ngokuthi umuntu. Kungukufakelwa
umuntu. Ihlukene nabantu abangabanikazi bayo. Abanikazi be
inkampani yamashalofu, njenganoma iyiphi enye inhlangano engokomthetho, ihlukene nje
komunye nomunye njengoba abantu ababili behlukene. Inkampani ye-HJ Heinz
kuqalile ku-1869. Abanikazi bokuqala, abaphathi nabaqondisi banesikhathi eside
selokhu wadlula. Kodwa-ke, iminyaka yenkampani ihlala ikhona
Izinzuzo zeShelf Corporation
Ukutholakala ngokushesha - Inkampani eyakhiwe isilungele ukuthunyelwa
ukulethwa ngokushesha kunokufuna ukulinda uhulumeni
Ukwethembeka kumakhasimende (Lokhu kusebenza kahle kakhulu, ngombono wethu, lapho isikhathi sakho sebhizinisi sihambelana nobudala benkampani.)
Kungenzeka Khuphula amandla okubhida kuzinkontileka. Izinkontileka eziningi zokubhida zidinga ukuthi ibhizinisi libe phakathi kwamabili kuya amahlanu
iminyaka. Lokhu kusebenza kangcono uma isikhathi sakho sangempela ebhizinisini sihambelana nobudala benkampani.
Ukufinyelela ngokushesha esikweletini (ngoba inkampani ingena ezandleni zakho ngokushesha)
Ngokushesha ukuthola imali yebhizinisi (ngoba inkampani ingena ezandleni zakho ngokushesha)
Ngokushesha ukuthatha inkampani “esidlangalaleni” futhi kuthengise amasheya esitokisini
shintshana uma inqubo ethile ihlangatsheziwe, njengokufiswa kwesimo esifanelekile nokwezimali.
Isikhathi esingaphansi sokuhola ukufaka inkampani yakho
Ngokunokwenzeka ikhulisa amandla okubhida noma ukwethula ibhizinisi lakho enkundleni lapho ukhetho
izinkampani kufanele zibhidlize umkhawulo wobude besikhathi sobukhona
ukubambelela kwesivumelwano (kudalulwa ngokuphelele)
Ngokushesha ukuthola inkampani enokugcina isikhathi eside
Amathuba okufinyelela ngokushesha ebhizinisi
Izinzuzo ezingenhla zincike embonweni wethu kuphela futhi zingahle zingasebenzi esimweni sakho. Abathengi bezinkampani zamashalofu banezinzuzo ezithile ezinkulu ngalesanda kuvela
amabhizinisi afayilwayo. Okokuqala, izinzuzo ezichazwe ngenhla. Bese, i
ithuba lokukwazi ukuthenga inkampani esisunguliwe nokho
bazibeka njengabaphathi, abaqondisi nabaninimasheya, bebanika
ukulawula ngokushesha kwebhizinisi. Sincoma ukudalulwa okugcwele ngoba wazisa ababolekisi namanye amaqembu ukuthi usanda kuthola ibhizinisi elidala.
Kuyini i-shell Corporate noma i-Corporate shell?
Amagobolondo ezinkampani "izinkampani zamashalofu," njengoba aziwa, ukuthi
futhi yizinkampani esezakhiwe. Lezi zinhlobo ze
izinkampani ngokuvamile azinabo abaninimasheya, izikhulu noma abaqondisi
(ngaphandle kwalapho kudingeka ukuthi ifayelwe ukuze ilondoloze ukuma okuhle). Ngokuvamile
abanazo izimpahla noma izikweletu. Ibhizinisi elinjalo linokuthakazelela okusha
ikhaya elakhiwe futhi elimi ngomumo ukuba uhlale kulo.